ညဘက်ဆို အအိပ်နောက်ကျတတ်သူတွေဖတ်ကြည့်နေ – Shwe Yaung Lan
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလှပမှု၊ ခန္တာကိုယ်ပြည့်ဖြိုးမှု၊ အရပ်ရှည်မှု၊ စိတ်ကြည်လင်မှု စတဲ့ အရာများစွာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်နဲ့ အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီရှိမှသာ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အလှအပအတွက်ပါ အကျိုးရှိမှာပါ။
ဒီနေရာမှာသိထားဖို့က အိပ်ချိန် ၇ နာရီပြည့်ဖို့ဆိုပြီး ည ၁ နာရီအိပ်၊ မနက် ၈ နာရီ ထရင် အလကားပါပဲ။ အိပ်ချိန်တစ်ခုတည်း အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ယာဝင်ချိန်ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီအိပ်၊ မနက် ၆ နာရီ၊ ၇ နာရီလောက် ထတာဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါ။ဒါဆို ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှ အမြဲအိပ်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။
1. မျက်တွင်းကျပြီး မျက်လုံးအနားတစ်ဝိုက်ညိုမည်းစေပါတယ်။2. အသားအရေ ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။3. အသားအရေမကောင်းလာတဲ့အခါ အလှပြင်ရခက်လာပါတယ်။4. အရပ်ရှည်ဖို့ နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
5. ခန္တာကိုယ်ဟာ gym ဆော့လည်း လိုသလို body ရမလာနိုင်ပါဘူး။ဒါက အလှအပအတွက်ပဲရှိသေးတာ။ တကယ်က
1. နှလုံးအားနည်းလာမယ်။2. အစာအိမ်ရဲ့ အစာခြေဖျက်စနစ် ယိုယွင်းလာမယ်။3. အမောဖောက်လာမယ်။4. သွေးခုန်နှုန်း မူမမှန်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။5. ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ဖို့ နီးစပ်လာမယ်။
6. ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။7. ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းလည်း အားနည်းလာမယ်။8. Immune system ကျသွားမယ်။ ဖျားနာလွယ်မယ်။
အဲ့တော့ အိပ်ရေး ဝ ဖို့လိုတဲ့အပြင် အိပ်ချိန်မှန်ဖို့လည်း လိုပါတယ်ဗျ။ အိပ်ရေးလည်းမဝ၊ အိပ်ချိန်လည်းမမှန်လို့ကတော့ ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့ ရောဂါရလာလိမ့်မယ်သာ မှတ်။
ဆိုတော့ကာ အိပ်ပါ။ ဒီနေ့ကစပြီး ည ၁၁ နာရီဆိုတာနဲ့ အိပ်ယာထဲ ဝင်ကြည့်ပါ။ မအိပ်ခင် ခဏလေးပါပဲဆိုပြီး phone မကိုင်ဖို့မှာပါရစေ။ ခဏလေးကနေ ညသန်းခေါင်အထိ phone မချနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။၁၁ ဆိုတာနဲ့ phone ကိုရပ်၊ အကုန်လက်စသတ်ပြီး အိပ်ပါ။
ကျွန်တော် အိပ်တာနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ခဏခဏတင်နေတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ #thankuEx မစခင် အသည်းကွဲတုန်းက တစ်ပါတ်လောက်အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ရှိခဲ့လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်လေ့လာထားသမျှ အိပ်ချိန်၊ အိပ်ရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေကို အားလုံးသိအောင် ဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit Original Writer AD
အငယ်ဆုံးသားသမီးတွေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ရှိတတ်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာများ